SkAdNetwork? Sanduuqa Xogta Khaaska ah? Waxaan la taaganahay MD5s | Martech Zone
Bisha Juun 2020 ee Apple waxay ku dhawaaqday in IDFA ay u noqon doonto mid ka mid ah waxyaabaha lagu doorto macaamiisha marka la sii daayo bisha Sebtember ee iOS 14 waxay dareemeen sida roogga laga soo jiiday hoostiisa 80 bilyan oo warshad xayeysiis ah, u diraya suuqleyda jahwareer si ay u helaan waxa ugu fiican ee soo socda. Hadda waxaa laga joogaa laba bilood, welina madaxa ayaan xoqaynaa.
Iyada oo kii ugu dambeeyay dib u dhigis aad loogu baahnaa ilaa 2021, anaga ka warshadeyn ahaan waxaan u baahanahay inaan u isticmaalno waqtigan si wax ku ool ah si aan u helno heer cusub oo dahabi ah oo lagu ururinayo xogta macaamiisha; mid wax ka qabta welwelka asturnaanta iyada oo waliba awood u leh bartilmaameedka granular. Aniguna waxaan aaminsanahay, guddiga oo dhan, in heerkaas cusub yahay haashka emailka MD5.
Waa maxay MD5?
Algorithm The MD5 farriinta-dheefshiidka waa shaqo hash ballaaran loo isticmaalo soo saara a 128-bit hash qiimaha.
In badan oo ka mid ah warshadaha ayaa sugaya baalasha Apple ee SkAdNetwork iyo Sanduuqa Khaaska ah ee Google Chrome, laakiin labaduba waxay leeyihiin khasaarooyin badan. Labaduba waxay kahortagaan ganacsiga furan maadaama ay yihiin nidaamyo deegaan oo xiran oo ay leeyihiin kana shaqeeyaan aaladaha laftoodu. Haddii warshaduhu ay dib ula jaanqaadaan kaabayaashan xayeysiiska ah, kuwa waaweyn ee tikniyoolajiyaddu waxay awood u yeelan doonaan inay keligood la wareegaan oo ay ka hortagaan hor u socodka warshadaha illaa aan la samayn heer kale oo furan.
Waa maxay SkAdNetwork?
SKAdNetwork waa qaab u gaar ah ilaalinta asturnaanta rakibidda moobiilka. Ujeeddadeedu waa inay ka caawiso cabiridda heerarka beddelaadda ee barnaamijyada rakibidda ololaha (CPI) iyadoon wax u dhimayn aqoonsiyada isticmaalayaasha.
Waa maxay SKAdNetwork iyo maxay qabataa?
Intaa waxaa sii dheer, nidaamyadan waxay seegeen qiimaha ugu weyn ee lagu daro bartilmaameedka - xogta waqtiga-dhabta ah. Maaddaama ogeysiisyada u gaar ah la diro inta u dhexeysa 24 ilaa 48 saacadood xaqiiqda ka dib, xayeysiiyayaashu ma awoodi doonaan inay bartilmaameedsadaan macaamiisha xilligan ay suuqa ku jiraan mana awoodi doonaan inay ku xirxiraan howlaha barnaamijka waqti gaar ah, taas oo caqabad ku ah waxtarka xogta lafteeda.
Marka laga soo tago dhammaan cilladahaas, waa inaannaan iska indhatirin khataraha soo jireenka ah ee u oggolaanaya laba shirkadood oo keliya inay xakameeyaan dhammaan macluumaadka la xiriira asturnaanta. Sababtaani kaligeed waa inay kufilan tahay warshadaha inay hakad galaan kahor aqbalida xalka ay soo jeediyeen Apple iyo Google.
Si looga hortago tiknoolajiyaddan inay ka noqdaan xitaa ilaaliyaal aad u xoog badan macaamiisha, labadaba xayeysiinta iyo warshadaha suuqgeynta dhijitaalka ah waa inay u istaagaan xalka u furan xogta aqoonsiga.
Sababtoo ah MD5s waa xargo hexadecimal ah oo laga beddelay cinwaanka emaylka ee loo maro algorithm-ka, nidaamka oo dhan ayaa ka baaraandegaya macluumaadka macaamiisha xasaasiga ah wadada hal dhinac ah oo aan dib loogu xiri karin qofka. Si taas loo gaaro, waa aqoonsi diirad-gaar ah oo si ammaan ah isugu xiri kara xogta si loo abuuro astaamo isticmaale aan la aqoon laakiin weli awood u leh inuu bartilmaameedsado xayeysiis heer sare ah.
Maaddaama macaamiisha guud ahaan ay hayaan isla cinwaanka emaylka aasaasiga ah dhowr sano, MD5s waxay leeyihiin khariidad ballaaran oo ah habdhaqanka dhijitaalka ah iyo waxqabadka, sidaa darteedna, degel kasta, barnaamij, ama barxad kasta oo leh saldhig isticmaale diiwaangashan waxay ka faa'iideysan doonaan xogta xooggan, xiriirada, iyo lacag-sameynta.
Xalka la tijaabiyey lana caddeeyey, MD5s, gaar ahaan marka lagu daro macluumaadka cinwaanka IP-ga, ayaa noqon doona shabakadda ugu wax ku oolka badan ee horay u socota mustaqbalka iyada oo aan la helin MAIDs. MD5s, xayeysiiyayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay la xiriiraan macaamiisha mustaqbalka ee jaaliyadaha khadka tooska ah ee isticmaalayaasha ka diiwaangashan yihiin, xogtaas ayaa markaa lala xiriirin karaa iyaga si loo dhiso faa'iido leh, halka sidoo kale aan la aqoon, astaamo. Haddii korsasho badani dhacdo, qiimaha bulshooyinka khadka tooska ah ayaa si aad ah kor ugu kici doona.
Waa maxay MAID?
Aqoonsiga Xayeysiinta Mobilada ama Aqoonsiga Xayeysiiska Mobilada: adeegsade gaar ah, dib u dejin, aqoonsi aan la aqoon oo la xiriira aaladda casriga ah ee isticmaaleha isla markaana ay taageerayaan nidaamkooda hawlgalka mobilada. MAIDs waxay caawisaa horumariyeyaasha iyo suuqleyda inay aqoonsadaan cidda isticmaaleysa barnaamijkooda.
Runtu waxay tahay, ma jiro waxa ugu fiican ee soo socda, uguyaraan wali. Si kastaba ha noqotee, MD5 waa meel aad u jilicsan oo lagu dego marka loo eego dhulka Google ama Apple. Ma aha inaynu u degno nidaam xidhan si loo daboolo baahiyaha asturnaanta. Ilaalinta aqoonsiga macmiilka iyo macluumaadka xasaasiga ah ayaa muhiim ah, laakiin waxaan sidoo kale u baahanahay inaan awood u yeelano baahida macaamiisha una adeegno macluumaad iyaga la xiriira. Ilaa nidaam cusub oo furan la abuuro, aan ku dhaganaano waxa aan ognahay inuu shaqeyn doono.
Tags: tufaaxacpiemail hashgooglechrome googlehadhidfamacruufka 14md5md5 xashiishmoobiilka adxayeysiiska mobiladaxayeesiinta mobilesanduuqa ciidda gaarka ahSKAdNetwork
David Finkelstein waa hormuudka internetka, hal abuurka tiknoolajiyadda iyo aasaasaha shirkado badan oo internet ah oo soo taxnaa maalmihii ugu horreeyay ee internet-ka 1994. Hadda wuxuu u shaqeeyaa sidii Aasaasihii iyo Agaasimihii guud ee BDEX, kii ugu horreeyay uguna weynaa ee isweydaarsiga xogta macaamiisha Mareykanka